Tuesday November 06, 2018 - 19:30:47 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Muqaallo Video ah oo lagu faafiyay baraha internetka ayaa muujinayay kumanaan kun kalluun bakhtiyay ah oo dul sabbeynaya biyaha wabiyada alfuraat iyo Dajlah oo ah wabiyada ugu waaweyn ee mara wadanka ciraaq ayna ku tiirsantahay nolosha malaayiin qof oo reer Ciraaq ah.
Waxaa la arkayay Kalluun aad ufarabadan oo bakhtiyay kaas oo biyaha wabiyada dul sabbeynaya waxaana loo sabab looga dhigay biyaha wabiyada oo wasakhoobay, ragga firfircon ee wararka kasoo tabiya Ciraaq ayaa sheegay in su'aalo badan layska weydiinayo sababta ay wasaaradda deegaanka xukuumadda dabadhilifka ciraaq wax uga qaban waysay arrintan oo muddo isbuucya ah ka jirta wadanka.
Caro ay dadku ka muujinayaan bakhtiga kalluunka iyo dayacaadda ay xukuumaddu ku sameysay ayaa hareeyay warbaahinta qeybaheeda kala duwan waxayna dadka ciraaqiyiinta ah aaminsanyihiin in wadanka aysan ka jirin dowlad wax uqabanaysa shacabka iyagoo mas'uuliyiinta xukuumadda shiicadu ku badantahay ku sifeeyeen kuwa mashquulsan oo kaliya qeybsiga mushaaraadka iyo jagooyinka.
wasaaradda beeraha wadankaas oo arrinta ka hadashay ayaa usababaysa nuqsaan ku yimid biyaha wabiyada dajlah iyo alfuraat kuwaas oo kasoo burqada dhanka wadanka Turkiga waxayna intaas ku dartay in dhibaatada baaba'a kalluunka ay tahay waxyaabo wasakh ah oo dadku ay ku tuuraan wabiyada arrinkaas oo qeyb ka ah wasakhoowga biyaha.
Khalaf Cabdi samad oo katirsan kutlada Dowlatul qaanuud ee baarlamaanka xukuumadda shiicada Ciraaq ayaa warbaahinta u sheegay in sii socashada bakhtiga Kalluunka uu khatar weyn ku keeni karo mashruuca Kalluumeysiga ee ku faafay qeybo badan oo goobollada wadanka katirsan wuxuuna ugu baaqay xukuumadda in si degdeg ah ay wax uga qabato arrintan.
Dhibaatada ugu daran ee biyaha wasakhoobay iyo kalluunka baaba'aya waxay kajirtaa mandiqadda loo yaqaan [الفرات الأوسط] Alfuraatul awsad oo ka kooban gobollada kala ah Baabil,Alnajaf, Karbalaa iyo alqaadisiyah wasaradda caafimaadka ayaa dhankeeda sheegtay in arrinkan ay guddi usaartay, bilo ka hor ayay xukuumadda Baqdaad kajirta sheegtay in dalka ciraaq uu gaaray isku filnaashiyo dhanka kalluunka ah waxaase muuqata in dhawaqaasi ahaa mid waxba kama jiraan ah oo kalluunkii wabiyada ayey hadda dhibaato kajirto.
laba bilood ka hor malaayiin qof shiico ah oo ku nool gobolka albasrah ee Koonfurta Ciraaq dhaca ayaa dhigay kacdoonno ay ugasoo horjeedaan biyo la'aan iyo cudurka daacuun caloolaha waxaana gobolka ka dhacay Barakac baahsan kadib arkii ay wasakhoobeen biyihii muhiimka u ahaa noolaha oo idil.
Sidee buu Cudurka Aidis-Ka Ku Gaaray Ciraaq?